Maherin'ny 100 ny antony hiantohana ny dianao | Fitsangatsanganana tanteraka
Maherin'ny 100 ny antony hiantohana ny dianao
Rehefa mandeha na mamandrika ny fitsangantsanganana an-tsambo izahay Tsy te hieritreritra izahay fa mila miantoka an'io Na noho ny fanafoanana, fahaverezana, aretina na halatra, na izany aza, rehefa misy zavatra tsy ampoizina mitranga aminao dia faly ianao fa naka fiantohana. Mazava ho azy fa tsy mahasolo ny fahasahiranana voalohany sy ny fahasosoran'ny fahasimbana io, fa farafaharatsiny eny onitra ianao.
Amin'ny tranga fitsangantsanganana an-tsambo, noho ny toetra mampiavaka azy ireo, misy fotoana ny fiantohana fitsangantsanganana ankapobeny dia tsy manarona ny tranga rehetra sy ny tranga tsy ampoizina mety hitranga, ary mila manambara ianao fa sambo io. Manoro hevitra anao aho mba hamaky tsara an'ity lahatsoratra ity, indrindra raha tsy manana traikefa firy ianao rehefa mandeha.
1 Fiantohana fanafoanana na fanafoanana
2 Fiantohana miaraka amin'ny fandrakofana ara-pitsaboana
3 Fiantohana very entana
4 Eny amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, fa robina an-tanety aho
Fiantohana fanafoanana na fanafoanana
Ahoana ny mahazatra ny fitsangantsanganana an-tsambo mamandriha salanisa 71 andro mialoha, azo atao, fa raha vao manakaiky ny fotoana dia tsy maintsy foananao. Ny andro lasa izay nisy namana sasany nilaza tamiko fa niantso azy tany amin'ny birao fandatsaham-bato izy ireo ary tsy nahatratra ny dia, fa farafaharatsiny afaka nanova ny daty tsy nisy vidiny izy ireo.
Zava-dehibe ny mahalala izany tsy ny sambo rehetra no takiana aminao hanonerana anao raha toa ka nofoanana ny dia na tsy hanao izay toeram-pijanonana, mihoatra ny toetr'andro ratsy manery ny hanova lalana. Aleo jerena tsara ny fahafaha-mamerina ny volanao, na farafaharatsiny ampahany lehibe amin'izany, alohan'ny hanidiana ny dianao. Ity dia fanafoanana nataon'ny orinasa nanolotra ny fitsangantsanganana an-tsambo, fa Ny zavatra iray hafa dia ny manapahanao hevitra hanafoanana azy.
Rehefa manapa-kevitra ny hiantoka ny sambo fitsangantsanganana ianao, ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ireo antony mety hitarika anao hanafoana ny dianao, ohatra, misy fotoana tsy avelany handeha hivezivezy satria efa ela ianao no nihetsi-jaza, ary na izany aza tsy averinao ny volanao.
Amin'ny fotoana hafa dia miantoka anao ny fiantohana fisehoan-javatra tsy ampoizina sasany toy ny vonjy taitra ao amin'ny fianakaviana, loza voajanahary, lozam-pifamoivoizana, aretina…. Haverina ny vola nomenao fiantohana raha mbola voadinika ao amin'ny andalana fiantohana ny fanafoanana. Ity misy lisitry ny torohevitra momba ny fitsangantsanganana voalohany.
Misy dia misy mpiantoka izay manana vidiny raikitra arakaraka ny toerana alehany ho an'ilay mandeha sy ny hafa izay mampihatra isan-jato ny fiverenana amin'ny habetsaky ny dia. Ity famerenam-bola ity dia 5% bebe kokoa na latsaka, ary raha toa ka voamarina ny antony. Maso! Satria raha mandoa ny tapakila ho an'ny fitsangantsanganana miaraka amin'ny carte de crédit, ny sasany dia misy fandrakofana fanafoanana. Jereo tsara raha manolotra an'ity fandrakofana ity ny karanao.
Fiantohana miaraka amin'ny fandrakofana ara-pitsaboana
Fanontaniana lehibe iray hafa koa rehefa handeha mandritra ny andro maromaro ianao, dia inona no mitranga raha mila fiantohana ara-pahasalamana ianao. Ahoana no nilazantsika taminao tamin'ny tranga hafa, amin'ny sambo fitsangantsanganana misy ny fanampiana ara-pitsaboana, na dia lafo aza izany, raha tsy hoe manana fiantohana ara-pitsaboana ianao na tompon'andraikitra amin'ny fizaham-pahasalamana sy ireo fanafody. Toy ny fitsipika ny fiantohana avo lenta dia mandrakotra anao hatramin'ny 30.000 euro amin'ny fandaniana ara-pahasalamana azo itarina, ary ao anatin'izany ny fandaniana amin'ny nify.
Fiantohana very entana
Ity dia lohahevitra iray. Tena mahalana ny entana very amin'ny sambo fitsangantsanganana, satria ny entana dia vita amin'ny seranana iray ihany. Na izany aza, ny mety hitranga dia ny nanaovanao dia fitsangatsanganana an-tsambo miampy fitsangatsanganana an-tsambo ary tamin'ny dingana voalohany dia very ny kitaponao. Raha tsy manana fiantohana amin'ny fiaramanidina ianao, ny orinasam-piantohana sambo sasany dia manome toky farafahakeliny ho an'ny valizinao, Fa mazava ho azy, tsy midika izany fa haverinao izany. Ny tambin-karama ihany no resahina.
Eny amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, fa robina an-tanety aho
Ny tena marina dia any am-sambo matetika no misy ny halatra ao an-kabine. SAINGY Eny, mety hitranga izany rehefa midina any amin'ny seranana ianao dia angalatra na very. Amin'izay dia tsy maintsy jerenao raha ny fiantoham-piaranao ihany no manarona tranga tsy ampoizina eny an-tsambo na koa manarona zava-mahadomelina an-tanety.
Manoro hevitra anao izahay mba hangataka ny fandrakofana mialoha vola. Ity dia raha angalarina na very ny karanao dia azonao atao ny mampiasa vola mandra-panavotanao azy, ary tsy zavatra madinidinika izany rehefa mandeha amin'ny seranana sy seranana ianao. Farafaharatsiny mba hahamora anao ny manohy mankafy ny fialan-tsasatrao.
Manantena izahay fa miaraka amin'ireto torohevitra ireto dia nanampy anao izahay nanapa-kevitra ny amin'ny fiantohana fitsangantsanganana an-tsambo tsara indrindra, zavatra antenaiko fa tsy tokony hampiasainao, fa raha ilaina dia ho faly ianao fa nanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » General » Maherin'ny 100 ny antony hiantohana ny dianao
Ny lakile rehetra, araka ny filazan'ny orinasan-tsambo, ny etikety amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo
Ahoana ny fomba hijerena fitsangantsanganana an-tsambo